Tababar Kusaabsan Kahortaga Xanuunada Faafa Oo Ka Furmay Magaalada jigjiga - Cakaara News
Tababar Kusaabsan Kahortaga Xanuunada Faafa Oo Ka Furmay Magaalada jigjiga
Jigjiga(cakaaranews)Arbaco 3da May 2017.Waxaa maanta kafurmay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga Tababar uusoo agaasimay xafiiska caafimaadka DDSI islamarkaana kusaabsanaa kahortaga xanuunada faafa gaar ahaan nafaqo-darada iyo shuban-biyoodka.
Hadaba, tababarkan oo ah tababarka tababarayaasha ee (TOT) ayaa waxaa looqabtay xirfadlayaal caafimaad oo kakala socday gobolada doolo,jarar,qoraxey,Erar Iyo Nogob ayaa waxaa furitaankiisii kahadlay Wasiirka Xafiiska Caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil Cali oo sheegay in tababarkani yahay tababarka tababarayaasha ee looyaqaano (TOT) islamarkaana ay kasooqaybgaleen xirfadlayaal caafimaad oo kakalayimid gobolada.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sharax dheer kabixiyay ahmiyada iyo ujeedooyinka lagaleeyahay tabbarkan. Wuxuuna kubooriyay kaqaybgalaaysha in mudada uu socdo tababarku sifiican looga faa’iidaysto casharada islamarkaana si cilmiyaysan oo heersare ah loo gaadhsiiyo goboladii ay kakalyimaadeen xirfadlayaashu.
Ugudanbayna, dhankooda kaqaybgalayaashii tababarkan ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin kasooqaybgalka tababarkan. Waxayna tilmaameen inay sifiican uga faaiidaysanayaan casharada, una sii gaadhsinayaan goobihii ay kakalayimaadeen.